Allergie Somalisch - Voorlichting Vertaald
Home Diëtist Allergie Allergie Somalisch
Hypersensitivity cuntada (xasaasiyad iyo dulqaad la’aanta)
Waa maxay xasaasiyadda cuntada?
Xasaasiyadda cuntadu waa ereyga dallada u ah xasaasiyadda cuntada iyo dulqaad la'aanta.
Xasaasiyadda cuntada, habka difaacaagu waxa uu ka falcelinayaa maaddooyinka qaarkood ee cuntadaada. Nidaamka difaaca waxa uu sameeyaa unugyada difaaca jirka ee borotiinnada laga helo cuntada. Barootiinnada kicin kara falcelinta xasaasiyadda waxaa loo yaqaannaa xasaasiyad. Xasaasiyadda la yaqaan waa borotiinno gaar ah oo ku jira caanaha lo'da ama lawska ku jira.
Waa maxay dulqaad la'aan?
Jidhku waxa uu ka falcelin karaa cuntooyinka qaarkood isaga oo aan lahayn xasaasiyad. Markaa waa dareen cunno aan xasaasiyad lahayn. Waxaan ugu yeernaa dulqaad la'aan. Hal tusaale waa dulqaad la'aanta lactose. Dadku si fiican uma dheefi karaan lactose. Walxaha keena calaamadaha dulqaad la'aanta waxaa loo yaqaan kiciyeyaasha. Kiciyeyaashani waxay si dabiici ah ugu dhacaan cuntooyinka sida lactose-ka. Waxyaabaha ilaaliya sida sulphite sidoo kale waa kiciyeyaasha.
Wax badan ka akhri:
Dulqaad la’aanta lactose
Sidee bay caadi u yihiin xasaasiyada cuntadu iyo dulqaad la'aanta?
Xasaasiyadda cuntada, xasaasiyadda cuntada iyo dulqaad la'aanta cuntada ayaa ku dhacda qiyaastii 1 ilaa 4% dadka waaweyn iyo 4 ilaa 6% caruurta. Caruurta leh xasaasiyadda caanaha lo'da markay yaryar yihiin waxay caadi ahaan ka soo baxaan.
Sabababaha cunnada xasaasiyadda
Waxaa laga yaabaa in aad qabtid hidde u yeelashada xasaasiyad ama dulqaad la'aan. Hadday sidaas tahay, waxay u badan tahay inaad yeelato xasaasiyad ama dulqaad la'aan. Niyad-jabka dhaxalka ah, waxaanu ula jeednaa inaad leedahay ugu yaraan hal waalid ama walaal oo leh xasaasiyad cunto ama dulqaad la'aan. Ogaanshaha dareen-xumada cuntadu ma fududa. Calaamaduhu aad bay u kala duwanaan karaan waxayna ku kala duwanaan karaan qof ilaa qof. Waxaa intaa dheer, cabashooyinku waxay sidoo kale yeelan karaan sababo kale.
Waa maxay calaamadaha cunno-dareen-xumada (xasaasiyadda iyo dulqaad-la'aanta)? Calaamadaha xasaasiyadda cuntadu aad bay u kala duwan yihiin. Gaar ahaan cabashooyinka maqaarka, neefsashada iyo caloosha ayaa caan ah. Qaar badan oo ka mid ah cabashooyinka ayaa sidoo kale laga yaabaa inay leeyihiin sababo kale. Markaa waa muhiim in dhakhtarka qoysku meesha ka saaro dhammaan sababaha kale ee suurtogalka ah. Tusaalooyinka cabashooyinka la xidhiidha xasaasiyadaha iyo dulqaad la'aanta waa
Dareen-celinta xasaasiyadda afka iyo cunaha, sida barar, cuncun iyo guduudasho gudaha iyo agagaarka afka. Tani waxay badanaa bilaabataa dhowr daqiiqo ka dib marka la cuno miraha, khudaarta, lawska ama qolofleyda.
Urticaria (cuncun) iyo angioedema. Urticaria waa cudur maqaarka ah oo caadi ah oo keena qanjidhada, cuncun daran iyo mararka qaarkood xanuun. Nooc gaar ah oo urticaria ah waa angioedema, kaas oo dareere badan oo urursan ay ka dhici karto.
Anaphylactic Shoogga anaphylactic waa xaalad nafta halis gelisa oo ay keento fal-celinta xasaasiyadda daran ee jirka. Waxaa keeni kara dareen-celinta xasaasiyadda ee cuntooyinka qaarkood sida lawska ama sisinta, laakiin daawooyinka ama qaniinyada cayayaanada nah way keeni karaan anaphylactic shoog. Shoogga anaphylactic wuxuu caadi ahaan ka dhacaa natiijada xasaasiyad hore u soo baxday. Uma eka in cunto aad dhib la'aan cuni karto ay si dag-dag ah u keento anaphylactic shoogga.
Khatarta shoogga anaphylactic
Shoogga anaphylactic wuxuu noqon karaa dilaa haddii aadan wax ka qaban waqtigiisa. Calaamadaha shoogga anaphylactic waxay ku soo bixi karaan daqiiqado gudahood mararka qaarkood nah socdaan sacado. Haddii aan si habboon loo daawayn, shoog kale ayaa dhici karta 6 ilaa 8 saacadood ka dib. shoogga anaphylactic, waxaa laga yaabaa in cadaadiska dhiiggu saaid hoos ugu dhaco oo aad noqoto miir la’aan. Sidoo kale weerarka neefta ayaa isla markaa suurtagal ah. Mid ka mid ah calaamadaha ugu horreeya ee shoogga waa dareen xiiqsan, cuncun ama dhadhanka macdan ee afka. Tani waxaa badanaa la socda calaamadaha soo socda:
Dareemid diirimaad, dhidid
Barar afka iyo dhuunta ah
Shoogga anaphylactic wuxuu u baahan yahay cirbad adrenaline si loo joojiyo falcelinta. Bukaanada shoogga ku dhaca badanaaba way haystaan. . Haddii ay dhacdo shoog, bukaanku dhakhtarka ama shaqaalaha ambalaasta waa inay ku duraan sida ugu dhakhsiyaha badan ee suurtogalka ah.
Bukaanka u dhig dhabarkisa si siman isaga oo cagihiisa kor u qaadaya oo ka dabci dharka cariiriga sida karawaatiga.
Falcelinta isdhaafsiga ee udhaxeysa cuntada
Haddii aad xasaasiyad ku leedahay shrimp, waxaad sidoo kale ka falcelin kartaa carsaanyada. Sababtoo ah xasaasiyadaha ku jira cuntooyinkan ayaa aad isugu dhow. Marka tani dhacdo, waxaan ugu yeernaa falcelin isdhaafsi ah.
Falcelinta isdhaafsiga ee hay fever
Hay fever-ka waa xasaasiyad manka qaar ka mid ah geedaha, dhirta ama cawska. Mararka qaarkood bukaanada qaba hay fever ka ayaa sidoo kale yeesha fal-celin xasaasiyadeed marka ay wax cunayaan. Tan waxaa sidoo kale loo yaqaan falcelin-celinta isdhaafsiga. Tani waxay noqon kartaa sababtoo ah xasaasiyadaha qaarkood ee cuntada iyo manka ayaa xiriir la leh.
Dulmarka soo socdaa waxa uu taxayaa falcelinta isdhaafsiga ee u dhexeeya manka iyo cuntooyinka dhirta. Dhammaan falcelinta isdhaafsiga ee laso sheegay uma dhacaan si isku mid ah inta badan. Falcelinta-isdhaafsiga qaarkood ayaa runtii ah kuwo aan caadi ahayn.
Haddii ay dhacdo xasaasiyad: Falcelinta isdhaafsiga macquul ah ku dhacdo:
Grass pollen. Xilliyada ubaxa so baxaan: laga bilabo April illaa October, iyado o ku xeran tahay nooca cowska. Baradho, qamadi, yaanyo, laws, buckwheat.
Mugwort pollen (Artemisia Vulgaris). Xilliga ubaxyada so baxaan : August. Dhirta beerta iyo xawaashka ka soo jeeda qoyska Umbelliferae (aniseed, chervil, dill, caraway, coriander, parsnip, karootada, parsley, celery, fennel).
Birch pollen. Xilliga ubaxyada so baxaan: April illaa May. Qoyska miraha Rosaceae (strawberry, almond, apricot, tufaaxa, blackberry, raspberry, cherry, nectarine, pear, peach, plum, blackcurrant). Lawska, qaasatan hazelnut. Karootada, celery, baradhada.
Timothy cawska pollen. Xilliga ubaxyada so baxaan : May illaa September. Baradhada, tufaaxa, karootada, celery.
Ficil celinta isdhaafsiga ee xasaasiyadaha kale la leh
Marka lagu daro falcelinta isdhaafsiga ee aan kor ku soo sheegnay, falcelinta isdhaafsiga waxay sidoo kale ku dhici kartaa xasaasiyad kale. Hoos waxaa ku yaal dulmar:
Qashinka shinbiraha, baalalka shinbiraha Doorada ukunteeda cad
Dufta eeyga iyo yaanyuurta Doonfaar
Caarada boorka guriga Beerta dixiri qolokfa leh iyo fara-badne leh
Latex (xabaxa geedka caagga ah) Muuska, avocado, chestnut, xab-xabka, kiwi, buckwheat
nuujinta borotiinka xadhkaha shimbiraha marka la nadiifinayo qafiska shimbiraha, tusaale ahaan, waxa ay qofka ka dhigi kartaa mid aad u nugul borotiinka ukunta digaaga. Tan waxaa lagu magacaabaa Bird-Egg- Syndrome.
Miyaad dareentay inaad si xun uga jawaabto cuntooyinka qaarkood? Waxaan kugula talineynaa inaadan tijaabin inaad iska dhaafto ama isticmaasho cuntooyinka qaarkood. Waxa ugu fiican ee la sameeyo waa inaad tagto oo aad aragto GP-gaaga. Isaga ama iyada ayaa go'aamin kara haddii ay tahay fal-celin xasaasiyad ama dulqaad la'aan kadibna waxay kuu gudbin karaan takhtarka cuntada. Dhakhtarka cuntada ayaa kula shaqayn doona si loo helo sababta calaamadahaaga. Isaga ama iyada ayaa ku siin kara talo ku saabsan sida looga hortago falcelinta xasaasiyadda. Isaga ama iyada ayaa sidoo kale kugula talin doona sida aad isaga ilaalin lahayd cuntooyinka qaarkood adiga oo aan la kulmin yaraanta nafaqeynta.
Yareey khatarta xasaasiyadda ee ilmahaaga
Carruurtu waxay halis dheeraad ah ugu jiraan xasaasiyadda haddii ugu yaraan mid ka mid ah waalidiinta ama mid ka mid ah carruurta qoyska ka mid ah uu qabo xasaasiyad, sida qandhada cawska, neefta ama xasaasiyadda cuntada. Si looga hortago xasaasiyadda carruurta, waxaad samayn kartaa kuwan soo socda:
Naasnuuji, ugu yaraan 6da bilood ee ugu horreeya.
Haddii naasnuujintu ku guuldareysato, caanaha caanaha ayaa ah beddel la isku halayn karo oo badbaado leh. Quudinta macmalka ah ee Hypoallergenic oo ku salaysan qayb borotiinka hydrolyzate ah kama caawinayso ka hortagga xasaasiyadda. Waxaan xitaa kugula talineynaa quudinta macmalka ah ee si xooggan loo nadiifiyey..
Bilow inaad siiso qaniinyada ugu horreeya ee ilmahaaga marka ay barbar socdaan naaska ama caanaha macmalka ah inta u dhaxaysa 4 iyo 6 bilood.
Laga bilaabo da'da 4 bilood, waxaad bilaabi kartaa inaad siiso ilmahaaga qaniinyada ugu horreeya ee khudradda iyo miraha. Marka ilmahaagu tan la qabsado, waxaad isla markiiba ku dari kartaa subagga lawska ama ukunta cuntooyinkan fudud. Hubi inaad siiso subagga lawska iyo ukunta ilmahaaga ka hor intaysan gaarin 8 bilood
Ilmahaagu ma leeyahay cambaar ama xasaasiyad cunto? Ka dib u bilow inaad siiso subagga lawska iyo ukunta ka hor 6 bilood. Ballan la samee dhakhtarkaaga si aad ugala hadasho cuntadan. Kaliya fitamiin D iyo K marka naaska la nuujinayo, iyo fitamiin D marka si macmal ah loo quudiyo, ayaa ku filan. Ha siin wax fitamiino dheeraad ah.
Talo ku saabsan ilmaha iskuulka dhigta Haddii ilmahaagu xasaasiyad u leeyahay cuntooyinka qaarkood, fadlan u sheeg macalinka dugsiga:
Sheeg cuntooyinka uu ilmahaagu cuni karo. Waxaad siin kartaa xoogaa cunto fudud ah oo beddelka u ah daaweynta carruurta ee macallinka.
Kala hadal macalinka, haddii loo baahdo, 'qorshe degdeg ah' oo la diyaariyay iyadoo lala tashanayo dhakhtarka mas'uulka ka ah.
Hubi in macluumaadka dugsigu sidoo kale ku qoran yahay warqad. Ka dhig xogta mid soo jiidasho leh, tusaale ahaan warqad midab leh ama sawirka ilmaha. Warbixinta ha soo koobto oo ku dar lambarka taleefanka xagga hoose ee bog kasta si uu akhristuhu u soo waco haddii uu wax su'aalo ah qabo. Sidoo kale ku dar lambarka taleefanka dhakhtarka qoyska.
Ka samee warbixin gaaban dhammaan heshiisyada lala galo dugsiga.
Haddii loo baahdo, hubi in siringe leh adrenaline laga heli karo dugsiga oo si joogto ah u hubi taariikhda uu dhacayo. In kasta oo ay jiraan dhammaan tallaabooyinka, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in lagu maamulo adrenaline dugsiga. Tani waxay u baahan kartaa macalinku sidoo kale inuu barto sida loo maamulo.
Banaanka laga soo cunteenaya iyado la qabo xasaasiyad mise dulqaad la’aan
Sharciga Yurub wuxuu u baahan yahay makhaayadaha inay bixiyaan macluumaadka ku saabsan xasaasiyadaha haddii loo isticmaalay diyaarinta alaabta ama saxanka. Fadlan la xidhiidh makhaayadda si aad ugu wargeliso xajiintaada ama dulqaad la'aantaada, si aad uga fogaato isfaham la'aan kasta.
Dalxiis iyado la qabo xasaasiyad mise dulqaad la’aanta
Mararka qaarkood badeecooyinka qaarkood lagama heli karo wadamada kale ee fasaxa. Haddii aad leedahay ilmo la quudiyo caano gaar ah, iska hubi in kugu filan Nederlaand. Wadamada qaar waxay leeyihiin sharciyo ku saabsan soo dejinta cuntada. Bogga internetka ee ANWB waxaad ka heli doontaa macluumaad faahfaahsan waddan kasta.
Waa faa'iido leh in la keeno qaamuus la turjumay oo sawiro cuntooyinka la iska ilaalinayo.
Haddii aad ku safrayso urur safar, u sheeg xasaasiyaddaada. Sidoo kale qaado 'xirmo degdeg ah' oo cunto ah, haddii ay dhacdo in dariiqa lagu socdo ama cuntada aan lagu xisaabtamin markaad timaadid.
Markaad duulayso, u sheeg shirkadda diyaaradaha xasaasiyaddaada. Markaad raacdo diyaaradda, waxaad ku wargelin kartaa oo aad u sheegi kartaa wakiilka sida loo kaydiyo ama dib u kululeeyo cuntadaada.
Haddii aad degan tahay hoteel, fadlan la xidhiidh hudheelka ka hor.
Haddii aad isticmaasho dawooyin, u kala qaybi dhawr qaybood oo shandad ah (tusaale inta u dhaxaysa shandad gacanta iyo shandadaada). Haddii qayb ka mid ah shandadu ay lunto, ugu yaraan qayb ka mid ah daawadu way sii jiri doontaa.
Haddii aad safrayso, qaado baasaboor caafimaad. Baasaboorka caafimaadka, marka lagu daro faahfaahinta shakhsiyeed, waxaad ku dari kartaa macluumaadka ku saabsan nooca jirradaada, walxaha aad iska ilaalin karto, calaamadaha iyo magaca iyo tafaasiisha dhaqtarkaaga guud. .
Haddii ay dhacdo khatar sii kordheysa oo ah fal-celinta xasaasiyadda nolosha-khatarta ah ama xaalado kale oo leh khatarta miyir-beelka, billadda Qaylo-dhaanta Laanqayrta cad waxay si dhakhso ah u siin kartaa macluumaadka muhiimka ah dhakhtarka degdegga ah. Calaamaddu waxay ka kooban tahay dhammaan xogta lagama maarmaanka ah.
Dhakhtarka qoyska ayaa kaa caawin kara buuxinta Baasaboorka Caafimaadka Yurub iyo qalabka digniinta.